Qaybaha ku jira Linux
Laga soo bilaabo Linux waa bartaada internetka ee hadda oo aad ka heli doontid wax kasta oo la xiriira adduunka Linux. Intaas waxaa sii dheer, maadaama laga yaabo inaad magaceeda ka ogaatay, waxaad sidoo kale heli doontaa casharro, buugaag iyo tilmaamo si aad hawl kasta uga qaban karto Linux, taas oo kaa caawin doonta inaad iska ilowdo nidaamyada kale ee hawlgalka, gaar ahaan haddii aad tahay "furaha".
Sababtoo ah Google waxay go'aansatay inay ku saleyso nidaamkeeda hawlgalka mobilada Linux, blog-kan sidoo kale wuxuu hayaa macluumaad la xiriira adduunka Android. Warka lagu daabacay Inuu ka yimid Linux wuxuu kaloo uruuriyaa macluumaadka la xiriira dadka caanka ah ee Linux, oo ay ku jiraan Linus Torvalds, oo isagu abuuray, horumariyo isla markaana ilaaliya kernel-ka nidaam kasta oo Linux ah.
Codsiyada aan kaga hadlayno boggan waxaan ku leenahay naqshadeyn, barnaamijyo, barnaamijyo warbaahin fara badan ama, dabcan, ciyaaro. Waxaad haysaa liiska Qeybaha Linux. Kuweena kooxda tifaftirka ayaa mas'uul ka ah dayactirka iyo cusbooneysiintooda maalin kasta.
Shabakado / Adeeg